गलसुआशोथ - यो के हो? यो रोग, मुख्यतया गलसुए को सुनिंनु द्वारा विशेषता छ जो। यो अचम्मको त्यसैले, आफ्नो हटाउने हालै मनपर्ने विशेषज्ञहरु को बहुमत मा उपचार को विधि सम्म थियो भन्ने छ। कट - र कुनै समस्या। यहाँ केही तथ्याङ्कले छन्। तथ्याङ्क अनुसार, (पनि ग्रन्थीहरूको रूपमा जानिन्छ) amygdala को पचास जसको जन्म वर्ष 1970 र 1980 को बीच गिर बच्चाहरु को प्रतिशत हटाइएको थियो। तर, सबै त गुलाबी छैन: निस्सन्देह, बच्चा मा गलसुआशोथ अब देखा, तर अक्सर बिरामी दुखेको घाँटी बच्चा छाडेनन् प्राप्त। त्यसको विपरीत, डाक्टर जवान विरामीहरु मा माथिल्लो श्वसन पर्चा रोग मात्र थप बारम्बार भए उल्लेख गरे। व्याख्या गर्न यो एकदम सरल छ: पछि tonsillectomy को श्लेम लाग्एको को सुरक्षा गुण जोडले परे।
छैन गलसुए बाहिर कटौती गर्न एउटा कारण छ - हाल, एक स्वरमा डाक्टर को विशाल बहुमत पुरानो गलसुआशोथ कि, भन्न। यो र धेरै कम कट्टरपंथी तरिकामा हुनुपर्छ सक्नुहुन्छ व्यवहार गर्छन्।
सबैभन्दा गलसुए के हुन्? तिनीहरूले velum को पक्ष मा, नरम तालु र जिब्रो बीच अवस्थित छ। कुनै पनि जीव पाठयपुस्तक, तपाईं गलसुए को pharyngeal lymphoid घन्टी भाग पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मुख्य कार्य pathogenic जीवाणुहरु inhalation वा घूस बेला शरीरमा प्रवेश गर्न अनुमति छ। यसरी, गलसुए एक सुरक्षा बाधा र गलसुआशोथ एक प्रकारको हो - आफ्नो "विनाश" छ।
गलसुए अक्सर सुनिंनु विषय हो भने, तिनीहरूले आफ्नो काम गर्न सक्दैन। शरीर फन्दामा सूक्ष्मजीवहरु, नाश गर्न र सुनिंनु प्रकुपित छन्। पहिलो, व्यक्ति बारम्बार लामो समयसम्म एनजाइना देखि पीडित (वास्तवमा, तीव्र गलसुआशोथ - यो दुखेको घाँटी छ), त्यसपछि रोग पुरानो बन्नेछ।
यो रोग के characterizes? डाक्टर लक्षण को एक नम्बर आवंटित। पहिले, यो निरन्तर शरीर तापमान, जो सप्ताह लागि बन्द दस्तक सक्दैन उच्च छ। दोस्रो, पहिले नै उल्लेख रूपमा, एक व्यक्ति उजागर छ फ्लू र अन्य सर्दी। तेस्रो, गलसुए सेतो caseous कोटिंग ढाकिएको छन्। रोगी पनि खराब सास भन्छन्।
उपचार प्रक्रिया मुख्यतया हटाउने उद्देश्य छ "slugging।" सबै भन्दा राम्रो उपाय हो गलसुए, धुन नियमित गर्नुपर्छ जो। साथै, चिकित्सक रोगी एन्टिबायोटिक सल्लाह दिन्छन् सक्छ। कुनै मामला मा आत्म-संलग्न हुन: गलसुआशोथ - सहित धेरै अप्रिय परिणाम, नेतृत्व गर्न सक्ने रोग हृदय रोग, rheumatism र glomerulonephritis।
डाक्टर रोगी लामो समय को लागि दीर्घकालीन गलसुआशोथ देखि पीडित यदि पूर्णतया गलसुए को सुरक्षा कार्य पुनर्स्थापना गाह्रो छ भनेर याद गर्नुहोस्। यस मामला मा, मुख्य उद्देश्य रोगी को प्रतिरक्षा सुधार छ। उहाँले immunomodulatory एजेन्ट नियुक्त, र तिनीहरूले ठूलो हेरविचार संग रोजेको हुनुपर्छ: लागूपदार्थ एन्टिबायोटिक संग संयुक्त हुनुपर्छ।
को धब्बा मा Escherichia कोलाई: कसरी गम्भीर?
को thymus ग्रंथि - केन्द्रीय अधिकार immunogenesis
Scoliosis लागि अभ्यास
Mumps, चिकन pox, चेचक: छोराछोरीको रोगहरु को सूची। लक्षण, उपचार, रोकथाम
घर मा प्लास्टिक Windows को स्थापना र जलवायु
समारा प्रदर्शनी कलाकार